अस्ट्रेलियामा भाँडा टल्काउदै विश्व किर्तीमानी साइकल यात्री पुस्कर शाह
नेपालका विश्व किर्तीमानी साइकल यात्री पुस्कर शाह यतिबेला कहाँ के गर्दैछन् । धेरैलाई चासोको विषय हुनसक्छ । तर, उनी अष्ट्रेलियामा भाडा टल्काइरहेका छन् भन्दा धेरै जना अचम्मित हुन पनि सक्छन् ।
हो पछिल्लो समय उनी अष्ट्रेलियामा रहेका छन् । उनले अष्ट्रेलियामा गएर भाडा माज्दै गरेको तस्बिरहरु आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा सेयर गरेका छन् भने केही घतलाग्दा शब्दहरु पनि शेयर गरेका छन् ।
विश्वका १ सय ५० मुलुकलाई साइकलबाटै पाँच पटक फन्को मारेका किर्तीमानी विश्व साइकल यात्री यतिबेला अस्ट्रेलियाको एक होटेलमा भाँडा मस्काउने नोकरीमा छन् ।
“ ए पुस्करजीलाई त म चिनीहाल्छु नि “ सम्माननीयले गर्ब साथ बोल्नु भो !
“अनि भन्नुस पुस्करजी“
“ संसारलाइ साडे पाँच फन्को पुस्तक लेखें “
“ वाउ ! “ सम्माननीय ज्यु दङ्ग पर्नु भो !
“ म २०४६ सालको जन आन्दोलनको घाइते पनि हो , चैत्र २४ गते दरबारमार्गमा प्रहरीको गोलिले दाहिने हात छेडेर गएको थियो !
बिर अस्पतालले मृतक घोषित गरेर मेरो नाम शहिदको सुचीमा छ ! “
“ त्यत्रो ४६ सालको योद्धा , जिउदो शहिद, ऐलेसम्म पार्टीसदस्यता लिनु भाको छैन ? “ घर फर्केको साँझ स्वकीय सचिबले मलाई फोनमा सोधे ! उनलाई म ४६ सालदेखि नै नजिकबाट चिन्छु ! उनै हुन् मलाई गुच्चा र गुलेली बोकाएर जन आन्दोलनमा होमिन सिकाउने !
“ देशको झन्डा बोक्नेले पार्टीको झन्डा बोक्दैन “ मैले उनलाई सुनाएँ ! त्यसपछि मेरो डुलुवा अनुभव मेरो माटोमा उपयोग नहुने निस्कर्ष निस्कियो !